Maninona No Tsy Hiparitaka Any Rosia Ny Revolisiona Tao Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2013 22:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, македонски, Español, English
Sary iray tsy misy anaran'ny tompony, mampitaha ny fomba fanoheran'ireo Okrainiana eo amin'ny havia ary ny an'ny Rosiana eo amin'ny havanana. (milaza ny “Revolisionan'ny Vihy“)
Nivadika ho herisetra ny hetsik'ireo mpomba ny fidiran'i Okraina ho ao amin'ny Vondrona Eoropeana, hatramin'ny nifandonan'ny polisy sy ireo mpanao fihetsiketsehana ny 1 Desambra2013 teo, nakàn-dry zareo ireo tranom-panjakana maro tao Kiev afovoany. Vao maraina be, ny 30 Novambra, naparitaky ny polisy tamin-kerisetra ny famoriam-bahoaka am-pilaminana tao Berkut, ireo polisy Okrainiana mpandrava korontana, izay vao mainka nandrehitra indray ilay hetsika efa teo andalam-pialàna aina. Any atsinanan'ny sisintany, mitohy hatrany manaraka am-pahalinana ny fivoaran'ny toe-draharaha ireo bilaogera, na dia mbola kely ihany aza ny fisian'ny marimaritra iraisana mikasika ny dikan'ireo hetsi-panoherana ireo ho an'ny hetsiky ny fanoherana ao Rosia
Niaiky ny maro fa ny tetikady nahery setra nataon'ny polisy (izay, araka ny hevitry ny [ru] lefitry ny filankevitry ny tanànan'i Maosko, Konstantin Yankauskas, dia “endri-javatra fanaon'ireo mpandàla an'i Putin”) no nahatezitra ireo Okrainiana nahatonga azy ireo nanomboka nanao korontana. Tao amin'ny pejiny Facebook, nazavain'i [ru] Yury Saprykin, mpanao gazety, fa angamba faran'izay mora tohina amin'ny karazana herisetra toy izany ry zareo Okrainiana:
Irek Murtazin, bilaogera anatin'ny fanoherana, dia mihevitra [ru] fa io hetaheta hamely governemanta io dia tsy misy hita loatra ho mitovy aminy ao anatin'ny Rosiana mpanohitra — sady izao koa, taorian'ny nanaparitahana an-kerisetra ireo vahoaka marobe nandritra ny korontana tao Maosko ny 6 May 2012, herinandro maninjitra vao nahavita nikarakara firotsahana an-dalambe ho fanoherana, raha ny ampitson'iny fotsiny ho an'ireo Okrainiana dia efa nidinany ny arabe. Angamba lamosin-tsokatra tsotra izao amin'ny herisetran'ny polisy tahaka izany ve ry zareo Rosiana?
Toy ny miara-miaiky [ru] ireo famoahan-gazety nasionalista Sputnik & Pogrom — ho azy ireo, ny antony mampahomby kokoa ny hetsi-panoherana Okrainiana mitaha amin'ny an'ny Rosiana, dia satria ry zareo Okrainiana miray tateraka amin'ireo nasionalista hiringiriny izay tonga dia ery anoloana avy hatrany rehefa misy fifandonana mivantana amin'ny polisy. Ao Rosia anefa, matahotra fatratra ireo Liberaly “be zesta” ny ho ampifandraisina amin'ireo nasionalista mba hahafahana mampiasa azy ireny ho amin'ny tsara
Ireo bilaogera tsy mankasitraka ny fanoherana Okrainiana kosa dia manao ny filazany manokana [ru] an'ireo mpihantsy [ru], amin'ny fanamarihana fa misy fanodinkodinana ny vaovao aely mikasika ny habetsahan'ny olona nanao hetsi-panoherana. Ohatra, ny loharano sasany milaza [ru] fa olona 1,6 tapitrisa no tonga tao Kiev afovoany mba hanao hetsi-panoherana. Tarehimarika tena nahavaka ny saina marina tokoa, mandra-pahatonga saina ny olona hoe zavatra namboamboarina io — na dia ireo antoko avy amin'ny fanoherana aza tsy nilaza afa-tsy mpanao fihetsiketsehana antsasaky ny iray tapitrisa, raha ireo vavolombelona nanatri-maso toa an'i Ilya Varlamov, mpitantana bilaogin-tsary [ru] maminavina fa teo amin'ny 100.000 teo ho eo no fitambaran'isa novinavinainy. Mba marina mafy, sary iray nivezivezy nanerana ny RuNet sy milaza ho maneho ny habetsahana marin'ireo olona marobe, no toa sary nalaina tamin'ny 2004 [ru].
Raha tsy hijerena izay fahombiazan'ny hetsi-panoherana Okrainiana any, maro no mihevitra mialoha fa hiverina hihahenjana ny fanarahamason'ny governemanta ao Rosia. Yuri Saprykin, mpanao gazety, dia tena maloka manokana [ru] mihitsy mikasika ny ho valy bontana mety hitranga:
Raha marina ireo tatitra vao haingana [ru] hoe nanaiky ny fitakian'ireo mpanao hetsi-panoherana ny Filoha Okrainiana Yanukovich, dia harary an-doha mafy ny avy amin'ny fanoherana Rosiana.